Ankadifotsy Tratra ilay ray nanolana ny zanany vavy
Lehilahy iray, 37 taona no voasambotry ny polisy teny Ankadifotsy omaly alakamisy noho ny resaka fanolanana.
Ny volana mey taona 2019, dia naharay fitoriana ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona ao Tsaralalana, nilaza fa nisy zazavavy 15 taona naolan'ny rainy niteraka azy. Ny Rahavavin-drenin’ity zazavavy ity moa no tonga nametraka fitoriana teny amin’ny polisy saingy norahonan’ilay rangahy indray ka tsy nipoitra teny amin’ny polisy intsony izy. Noho ilay fanolanana nitranga dia bevohoka ilay zazavavy ka teraka. Rehefa teraka dia niverina tany amin’ny polisy indray izy nitory sy nitantara ny zavatra nahazo azy. Tsy niandry ela ny polisy fa avy dia nikaroka ilay rangahy ary tra-tehaka teny Ankadifotsy ity farany. Omaly moa no natolotra ny fampanoavana ity ray niteraka nahavanon-doza ity.